အပြင်မှာအိပ်ခြင်းကြောင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်တဲ့အရာ (၆) ခု – MyHealth Myanmar
အပြင်မှာအိပ်ခြင်းကြောင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်တဲ့အရာ (၆) ခု
ကျွန်မတို့တတွေဟာ ငယ်ရွယ်စဉတုန်းက အိပ်စက်ရမှာကို အလွန်မုန်းခဲ့ကြတာကို မှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အခုအချိန်မှာတော့ အိပ်စက်ခြင်းကို အလွန်နှစ်သက်လာပြီး တနေ့တနေ့ အိပ်လို့ကိုမဝဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း စိတ်ဖိစီးမှုတွေနှင့် တခြားအရာတွေကြောင့် ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်နိုင်ပါဘူး။ အဲ့ဒီအတွက် သတင်းကောင်းတစ်ခုကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်နော်။ကော်လိုရာဒိုတက္ကသိုလ်မှ လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် တဲတစ်လုံးတွင်အိပ်ခဲ့သူများက ၁၀နာရီ အထိကြာအောင် အိပ်စက်ခဲ့ကြပြီး အိမ်မှာအိပ်ရာဝင်ချိန်ထက် ၂နာရီစော အိပ်ရာဝင်ခဲ့ကြသည်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အိမ်အပြင်ဘက်တွင် အိပ်ဖို့ကြိုးစားသင့်တဲ့ အကြောင်းပြချက် ၆ ချက်နဲ့ ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
ကော်လိုရာဒိုတက္ကသိုလ်မှလေ့လာမှုတစ်ခုအရ သင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကို သဘာဝအလင်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်းက သင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်၏ နုပျိုလန်းဆန်းခြင်းကို ပြန်လည်မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ အကယ်လို့ အိပ်မပျော်တဲ့ညတွေကို သင်အဆုံးသတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အပြင်ထွက်ပြီးအိပ်စက်ဖို့ကို စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
၂။သင့်ရဲ့ Melatonin ကိုပြောင်းလဲပေးပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုကသင်ရဲ့ စမတ်ဖုန်း ဒါမှမဟုတ် ကွန်ပျူတာမှအလင်းအတုက သင်ရဲ့ melatonin ပမာဏကိုလျှော့ချနိုင်ပြီး ၎င်းသည် သင်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းကို အကျိုးသက်ရောက်စေတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သလောက် အပြင်ဘက်တွင်အိပ်ရန်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်‌သော လေ့လာမှုတစ်ခုအရ သစ်တောထဲတွင် ၂ နာရီခန့်အိပ်စက်ခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့အတွက် များစွာအကျိုးရှိပါတယ်။ သွေးပေါင်ချိန်ထိန်းပေးခြင်း၊ cortisol ပါဝင်မှုလျှော့ချခြင်း၊ သွေးခုန်နှုန်းထိန်းပေးခြင်းနှင့် သွေးဖြူဥများမြင့်မားခြင်းစတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သစ်တောထဲတွင် တစ်ညအိပ်စက်ခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့ရဲံကိုယ်ခံစွမ်းအားကို အနည်းဆုံးတစ်ပတ် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဦးနှောက်က ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကြွက်သားများ လုပ်တဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အောက်စီဂျင်များစွာအသုံးပြုရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဓိကလျှို့ဝှက်ချက်က ကျွန်ုပ်တို့ရှူရှိုက်မိသော အောက်ဆီဂျင်များလေလေ၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပိုကောင်းလေလေပါပဲ။ ဒါကြောင့် အပြင်ဘက်မှာအိပ်ခြင်းက သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ ဦးနှောက်အတွက်လည်းကောင်းပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာက ကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘဝနေထိုင်ပုံများအလိုက် အလွန်စိတ်ဖိစီးမှုခံကြရပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ သစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့ရုပ်ပုံကိုကြည့်ခြင်းကပင် သင့်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့နည်းစေပြီး အမှန်တကယ် သစ်ပင်တစ်ပင်ကိုကြည့်ခြင်းက ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကို ပိုပြီးအကျိုးရှိစေတယ်လို့ ဖော်ပြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အပြင်ဘက်က အသံတွေကလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်သက်စေပြီး ကောင်းကောင်းအနားယူစေနိုင်ပါတယ်။
အကယ်လို့ သင်က လေဝင်လေထွက်မကောင်းတဲ့ ရုံးခန်းတစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်နေခြင်း သို့မဟုတ် Aircon အောက်တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာနေခြင်းက သင်ရဲ့ CO2 ပမာဏကများလာစေပြီး သင့်ဦးနှောက်ကိုထိခိုက်စေခြင်းနဲ့ အသက်ရှူပြဿနာများကို ဖြစ်စေပါတယ်။ သင်မကြာခဏအလုပ်စီမံကိန်းတွေနဲ့ ရုန်းကန်နေရပါသလား? သင်ရဲ့ဦးနှောက်ကို ကြည်လင်စေဖို့အတွက် အပြင်ဘက်သို့သွားပြီး ခဏ လေကောင်းလေသန့်ရှုပါ။
သင်ရောအိမ်အပြင်မှာအိပ်ဖူးလား? ကျေးဇူးပြုပြီးသင်ရဲ့အတွေ့အကြုံများကို ကျွန်မတို့နှင့်အခြားစာဖတ်သူများအတွက် မျှဝေပေးခဲ့ပါဉီး။
MyHealth Myanmar2020-04-06T09:48:17+06:30April 5th, 2020|General Knowledge, Health, Uncategorized|